Madaxweynaha Galmudug oo Go'aan cad ka qaatay doorashooyinka Soomaaliya - Awdinle Online
Madaxweynaha Galmudug oo Go’aan cad ka qaatay doorashooyinka Soomaaliya
Madaxweynaha Galmudug ayaa bilaabay wada hadal uu ku dhammeynayo khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka & musharixiinta Madaxweynaha Soomaliya ee kahor yimid Guddiga maamulada Doorashada 20/21.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor uu Xukuumadda Federaalka uga cudur daartay in Guddiga uu soo gudbiyay lagu biiriyo tababarka la siinayo.
Ujeedka uu u qaatay go’aankaas ayaa ah sidii uusan dhaawac siyaasadeed ugu geysan lahayn wada hadalka uu la leeyahay Madaxda Dowladda Federaalka & Midowga Musharixiinta oo saluugsan shaqsiyaad ku jira Guddiga Maamulada Doorashada 20/21.
Qoor-Qoor si toos ah ayuu sheegay in maamulkiisa uu ku dhiiranayo isu keenidda dhinacyada Siyaasadda ku kala fogaaday, waxa uu ka dalbaday in ay joojiyaan tallaabooyinka sii kala dur-jiranaya dhinacyadaan sida uu ku sheegay Khudbad uu ka jeediyay Shirka Iskaashiga Soomaaliya.
Madaxweynaha DG Galmudug ayaa Muqdisho joogay muddo 20-cishe ah, waxa uu qaabilay madaxda Dowladda Federaalka & musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya intooda badan oo midba mar waqti la qaatay.
Previous articleGuddiyada kala dhiman ee doorashooyinka Heer Dowlad goboleed oo la xareeyay
Next articleCumar Filish oo mucaaradka uga digay Colaad ka dhacda Magalada Muqdisho